KDE Kunyorera 20.08.3 inouya neapp nyowani yemitambo yeArcade uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri ve KDE vakaburitswa ichangoburitswa munaNovember kugadzirisa KDE Kunyorera 20.08.3. Pakazara, mukati mekuvandudzwa kwaNovember Mavhezheni eanopfuura zana nemakumi mapfumbamwe emapurogiramu, maraibhurari, uye plug-ins aburitswa.
1 KDE Kunyorera 20.08.3 Main Zvitsva Zvimiro
1.1 Edza KDE Kunyorera 20.08.3
KDE Kunyorera 20.08.3 Main Zvitsva Zvimiro
Nekuuya kweiyi nyowani vhezheni vhezheni, tinogona kuona kuti ndizvo akawedzera app nyowani kudana "Arkade" inova app ine muunganidzwa weArcade mitambo yakagadzirirwa kushandisa chimiro cheKirigami kugadzira zvepasirose maficha e desktop uye nharembozha.
Chimwe chikumbiro chinobatana nematanho KDE Kunyorera kuri KGeoTag, inoitirwa kushanda nemageotags akabatanidzwa kumifananidzo.
Zvakare, mu KDE Kunyorera 20.08.3 iyo itsva yekushandisa «Neochat» inowedzerwa inova kunyorera ine mameseji sisitimu yekushandisa iyo inotsigira iyo Matrix protocol. Neochat forogo yeSpectral, yakanyorwa zvekare ichishandisa iyo Kirigami fomati, uye basa rayo rinotsigirwa paWindows, Android, uye Linux.
Kana zviri zvekushandisa izvo zvatove mukati meKDE Zvikumbiro, isu tinogona kuwana izvo zvekuvandudzwa zveiyo gadziriso yemifananidzo "Krita 4.4.0", vhezheni iyo inosanganisira multithreaded kuitiswa kwepadding materu, rutsigiro rwekushandura ekuzadza mapatani, matsva ekuzadza materu, mabhurashi matsva, uye zvimwe shanduko zvinokurukurwa mune imwe ongororo
A KDE Partition Manager vhezheni 4.2, iyo inoshandiswawo sehwaro hwekuparadzanisa manejimendi interface muCalamares simaki. Iyo vhezheni nyowani yakavandudza rutsigiro rwezvikamu zvine zvisingazivikanwe mafaira masisitimu, inoshanda nemapoinzi mapoinzi, uye inobata / etc / fstab.
Uyewo, Isu tinogona zvakare kuwana iyo nyowani vhezheni yeiyo yakasanganiswa budiriro nharaunda yakagadziridzwa muR "RKWard 0.7.2". Mune vhezheni itsva, zvinyorwa zvakanyorwazve muPython 3, scrolling yakatwasanuka painogadziridza script preview interface, chinhu chakawedzerwa kuchinjisa mutauro mumenu, wizard yekuongorora yakawedzerwa kumisikidza uye kutsigira Kate mupepeti plugins yakawedzerwa.
Ndakagadziridza vhezheni yevatengi ye IRC Kukurukurirana 1.7.7, iyo inowedzera rutsigiro rwevatori vechikamu mifananidzo muSVG fomati uye inopa musiyano weyakajairwa icon yakatarwa yerima theme
Mukushandisa KRename 5.0.1, yakagadzirirwa faira hombe kutumidzazve zita, dambudziko rekutiza akasarudzika mavara mumazita emafaira rakagadziriswa, uye kushanda paHiDPI skrini yakagadziriswa.
Yeimwe shanduko dzinomira yeiyi nyowani vhezheni yeKDE Kunyorera 20.08.3:
Iyo Gwenview mufananidzo muoni akagadzirisa dambudziko rekuratidzira thumbnail mune rakasiyana hwindo kana uchishandisa Qt 5.15.
Iko kugona kutumira SMS kunodzoserwa kuKDEConnect.
Yakagadziridzwa Elisa mumhanzi mutambi.
Yakagadziriswa tsaona muOkular gwaro rekutarisa kana uchisarudza zvinyorwa muzvidimbu.
Iyo kodhi yeapps.kde.org app katarogu yakagadziridzwa uye kufamba mumitauro yakasiyana kwakarerutswa.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi nyowani yakaburitswa KDE Kunyorera 20.08.3 yekuvandudza, unogona kutarisa izere changelog mukutanga kuburitswa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Edza KDE Kunyorera 20.08.3
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » KDE Kunyorera 20.08.3 inosvika neapp nyowani yemitambo yeArcade uye nezvimwe
Dell arikushanda "yega bhatani" kudzima maikorofoni uye kamera muLinux